Ity scam WhatsApp vaovao ity dia efa namitaka mpampiasa maherin'ny 260.000 | Vaovao momba ny gadget
Ity scam WhatsApp vaovao ity dia efa namitaka mpampiasa maherin'ny 260.000
WhatsApp Nanjary lasa mandeha ho azy ny fampiharana fandefasan-kafatra mailaka be mpampiasa eran'izao tontolo izao, nefa koa iray amin'ireo tontolo iainana izay misy ny fisolokiana misimisy kokoa. Ny iray farany dia miteraka fahasimbana ary izy io dia nahavita namitaka na saika afaka nilaza isika fa nanodinkodina mpampiasa maherin'ny 260.000 manerantany.
Ity scam ity dia mifototra amin'ny zavatra tena tsotra, ary amin'ny tranga maro dia mahavita mamitaka saika karazan'olona mpampiasa rehetra. Ny rindranasa iray izay mampanantena asa fanampiny ho an'ny WhatsApp no ​​ivon'ity scam ity, izay any Brezila ihany no misy ny mpampiasa voakasik'izany.
Ao amin'ny hafatra voaray alohan'ny hametrahana ny APK manimba, ampanantenaina izahay hampahafantatra aminay ny olona rehetra izay tsy manana fanampiny ao amin'ny WhatsApp-ny ary koa ny fahafaha-mampiasa fampiasa fanampiny hafa, izay mazava ho azy fa tsy misy.
Araka ny efa nolazainay taminareo amin'izao fotoana izao, any Brezila ihany ity scam ity, na dia tsy antenaina aza fa ho tonga any amin'ny firenen-kafa, izay tsy hahitanay an'i Espana. Raha tsy te ho tratry ny fiambenana ianao dia aza misintona rakitra avy amina loharano tsy fantatra na raha tsy nampitandrina anao ny namana na havanao iray. Ho fanampin'izany, tsy ho zava-tsy ilaina ny famonoana ny boaty "Fiaviana tsy fantatra" amin'ny finday avo lenta izay anananao amin'ny vola laninao mba hialana amin'ny faharatsiana lehibe kokoa.
Moa ve ianao efa lavo tamin'ireo fisolokiana marobe izay miparitaka saika isan'andro ao amin'ny WhatsApp?.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Ity scam WhatsApp vaovao ity dia efa namitaka mpampiasa maherin'ny 260.000
GeForce Now, milalao ny lalao ankafizinao amin'ny ekipa tena maotina
Ity no finday Nokia voalohany misy Android, ny Nokia 6